I-smear evela e-urethra ingenye yezinto ezidingekayo zokuhlolwa kokuhlukunyezwa. Inhloso yokuthatha isisindo ukuthola izinambuzane emgodini we-urinary, okuyisifo esibangela ukugula kwezifo eziningi ezingathandekayo neziyingozi. Futhi, lokhu ukuxhaphazwa ngezifo ezithile zokuvuvukala (isibonelo, nge-cystitis) kungakuvumela ukuba ukhethe imithi ephumelela kakhulu yendaba ethile.
Naphezu kwesidingo senqubo enjalo, abaningi bayesaba. Ngokuvamile - ngenxa yokungazi okusemqoka. Iyini i-smear e-urethra? Ingabe kubuhlungu? Le mibuzo ivame ukuzwa ehhovisi le-urologist. Ngakho kungani ungafundi mayelana nenqubo ezayo kusengaphambili ukuze uhlaziye ngaphandle kokwesaba?
Ngakho-ke, ake sikhulume ngokuthatha ngaphezulu kwesimiso. Le nqubo ithatha isikhathi esincane kakhulu, ngakho-ke ihlupheka kakhulu ngenxa yamahora ambalwa isiguli nganoma isiphi isimo ngeke kudingeke. Njengoba kungase kuqondwe ngamagama, i-smear evela e-urethra ithathwe ku- urethra. I-urologist ifaka ipurethi ekhethekile noma isipuni seVolkmann ekujuleni kwamamitha amabili kuya kwamathathu futhi yenza ukukhipha kwesinye sezizindonga zomsele. Yiqiniso, le nqubo ingaba yinto engathandeki kakhulu isiguli futhi ibuhlungu nakakhulu, kodwa ukunganaki kuyodlula ngokushesha. I-smear evela e-urethra emadodeni nakwabesifazane ithathwa ngendlela efanayo.
Ngemva kokuthatha le smear, udokotela uyifaka esilayidi bese eyihlola ngaphansi kwe-microscope. Njengomthetho, ukwenza lula ukutadisha, kukhishwe amadeyi akhethekile.
I-smear e-urethra ithatha ulwazi oluningi olubalulekile olungasiza udokotela ukuba athole isifo esinjengesisifo ezifana ne-prostatitis, i-cystitis, i-urethritis, i-trichomoniasis, i-gonorrhea, i-ureaplasmosis, i-chlamydia, izifo ezibangelwa candida, i-gonococcus ne-Trichomonas, kanye nokungqubuzana kwe-microflora yesifazane .
Njenganoma yikuphi ukuhlaziywa, i-smear evela ku-urethra inezinkomba zayo ezivamile. Ngakho-ke, ngendlela evamile ingaqukatha i-leukocytes ( emkhakheni wombono - kuze kube yizingcezu ezinhlanu), amaseli e-epithelial (kusuka ku-5 kuya kweyishumi), i-mucus (ngesilinganiso esincane), kanye ne-cocci (ngabanye), amangqamuzana egazi abomvu (kuze kube kabili). Kodwa amabhaktheriya, i-gonococci, amangqamuzana ayisihluthulelo, i-trichomonads, i-candida, i-spermatozoa ne-body lipoid kumele ingabi khona.
Ukunikeza i-smear e-urethra yokuhlaziywa kunconywa njalo, ngesikhathi sokuhlolwa kokuvimbela, noma kunjalo, kunezimo lapho kunesifiso sokwenza ukuhlaziywa ngokushesha. Ngakho-ke, akukhuthazwa ukuba ulinde ukuhlolwa okujwayelekile uma uhlela ukukhulelwa noma ekuqaleni. Ngaphezu kwalokho, kufanele uhambe ngokushesha kudokotela ukuze ubuhlungu futhi ungakhululeki ngesikhathi sokuvuthwa nokulala ngokomzimba, kanye nokuvuthwa njalo nokukhishwa ku-urethra.
Kumele kukhunjulwe ukuthi ngaphambi kokuba kutholakale isifo se-smear esivela ku-urethra, kubalulekile ukuyeka ukuthatha imithi eyodwa kwamasonto amabili (uma lokhu kungenakwenzeka, kuyadingeka ukwenqaba okungenani ama-antibiotic noma ukuhlehlisa ukuhanjiswa kokuhlaziywa). Usuku ngaphambi kokuhlolwa kufanele udweme ukulala ngokobulili, futhi amahora angu-2-3 kunconywa ukuthi ungagcini.
Ukuze uqhubeke nokuhlaziywa kuhle kakhulu ekuseni, usuku olulandelayo ngaphambi kokuba ama-genitals ahlanzwe. Uma isiguli singakubekezeli izinqubo ezibuhlungu, udinga ukuxwayisa udokotela ngakho-ke isisindo sizoyithatha isikhundla esingezansi.
I-langet ehlelwe kahle kakhulu engalweni yenza i-fusion fusion ishicilelwe
Ifenisha Modular for egumbini lokuphumula - ifenisha ka ngekhulu xxi
Kuyini icebo uhlela inhlangano yezwe, na?